ရှညောသား: May 2018
တချိန်တုန်းကအညာသားပညာရည်နို့သောက်စို့ခဲ့ရာ ပုပ္ပားတောင်ခြေ အညာမြေက ကျောင်းတော်သာ
အဖြူအစိမ်းဆိုလို့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနဲ့သူ့သားလေးသာတစ်ကျောင်းလုံးမှာမြင်ရတတ်ပြီးကျန်တဲ့ကလေး တွေကတော့ရောင်စုံအင်္ကျီဘောင်းဘီနဲ့သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား၊တချို့လည်းဖျင်ကြမ်းလွယ်အိတ်၊တချို့လည်း ကျန်ကျောင်းရုပ်ပုံကြွပ်ကြွပ်အိတ်တဖုံ၊တချို့ကအဖေ့ပုဆိုးအချောနဲ့စာအုပ်ကိုထုပ်ခါတသွယ်၊တချို့ကအမေ့ ခေါင်းပေါင်းတဘက်ထဲကိုစာအုပ်ကျောက်သင်ပုန်းထည့်ထုပ်ပြီးပွေ့လို့ကျောင်းကိုလာကြတယ်။တချို့လည်း အိမ်ကရှိတဲ့လွတ်အိတ်ထောင့်ပေါက်ကိုသားရေကွင်းနဲ့ချည်ပြီးစာအုပ်ကျောက်သင်းပုန်းကိုထည့်လွယ်လာတတ် တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရွာထဲမှာယက်ကန်းစင်တွေအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိတော့စောင်တို့ပုဆိုးထမီတို့ရက်တဲ့အခါ တတောင်နှစ်တောင်လောက်ပိုထည့်ပြီးလွတ်အိတ်တို့တဘက်တို့ချုပ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့လွယ်အိတ် အကောင်းစားလွယ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖျင်ကြမ်းလွယ်အိတ်အသစ်လောက်သာပါပဲ။
ထန်းလက်ပေတံသုံးတဲ့သူကများပါတယ်။တချို့လည်းဝါးကိုထိုနည်းအတိုင်းချောအောင်သပ်ပြီးပေတံအဖြစ်သုံး ကြတယ်။လက်နဲ့ကိုင်မရတော့တဲ့ခဲတံတိုလေးများဆိုချွန်ပြီးတော့အပေါက်ပါတဲ့ဝါးဆစ်သေးသေးလက်တညိုး စာလောက်ဖြတ်အဲ့ဒီဝါးအပေါက်ထဲခဲတံတိုကိုစွပ်ပြီးရေးရတာလည်းရှိခဲ့တယ်။
အိမ်မှာရှိတာအဆာပြေစားပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကူလုပ်။ညရောက်တော့ကျောင်းကဆရာမသင်လိုက်သမျှ ဖတ်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးနာရီဝက်လေးဆယ့်ငါးမိနစ်အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့အော် အသံထွက်မှစာကျက် တယ်လို့လက်ခံတဲ့ရွာမှာတော့အော်နိုင်သူကအချီးမွမ်းအခံရဆုံးဗျ။ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိကျက်စာဆိုဘယ်လောက်များများဘယ်န်ှစ်ပုဒ်ကျက်ရကျက်ရ လာထားပဲ။ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတော့ပြုပြင်တတ်သွားပါတယ်ဗျ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, May 28, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ချက်လို့လွယ်ကူသလောက်စားလို့မြိန်စေတဲ့ဟင်းတမည်ပါ။ပထမဆုံးမှိုကိုရေဆေးထားပါ။ကြက်သွန်နီတစ်လုံး ကြက်သွန်ဖြူရှမ်းဥနှစ်မွှာကိုဒယ်အိုးထဲမှာဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီးနွမ်းသွားအောင်ဆီသတ်။ပြီးတော့မှိုထည့် ဆားအရသာမှုန့်ပြီးမှိုနွမ်းအောင်ခဏထားပါ။မှိုနွမ်းသွားတော့ရေနွေးသင့်တော်ယုံထည့်ပြီးဆူပွက်အောင်တည် အရသာအပေ့ါအငန်မြည်းပြီးငရုတ်သီးစိမ်းနှစ်တောင့်ထက်ဝက်ချိုးထည့်နောက်ဆုံးမှာပင်စိမ်းရွက်အုပ်ပြီး မီးဖိုကချပါ။ထမင်းပူပူကိုမှိုပင်စိမ်းအရည်သောက်လေးတွဲဖက်ပြီးရှုးရှုးရှဲရှဲနဲ့တနေကုန်ကျောင်းမှာပင်ပမ်းလာသမျှ
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, May 26, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, May 22, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
၂၀၁၇ ခုနစ်ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီကတည်းကဖေ့စ်ဘွတ်ကို Deactivate လုပ်ထားတာအခုဆို ၅ လ ပြည့်လာပြီ။စပိတ်ခါစတုန်းကတော့အချိန်ရတိုင်းဖေ့စ်ဘွတ်မှာကျက်စားနေတဲ့စိတ်ကပုစွန်ဆိတ်ခုန် သလိုမနည်းထိန်းယူရပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပါပြီ။ငါးလ တာအတွင်း စာအုပ်တော်တော်များဖတ်ပြီးသွားတယ်။စစချင်းတုန်းကတော့စာရေးဆရာလင်္ကာရည်ကျော်ရဲ့စာအုပ်တွေပါ။
မီသမျှလိုက်ရှာပြီးဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တာကတော့သမားလည်ပြန်ဝတ္ထုတိုများဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ ဆရာ့အရေးအသားတွေကဝတ္ထုတပုဒ်ချင်းစီတိုင်းမှာစာဖတ်သူကိုတနည်းနည်းနဲ့motivateလုပ်ပေးတာများပါ တယ်။ဒါကြောင့်စဖတ်ကတည်းကကြိုက်မိတယ်။ဆေးပညာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများ ပေမဲ့လူတိုင်းနာလည်နိုင်တဲ့အရေးအသားတွေနဲ့မို့ဖတ်ရတာအရာသာရှိလှပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးဆရာ့စာအုပ်တွေ
တော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။မှတ်မှတ်ရရတစ်အုပ်ကတော့ဆရာရေးတဲ့သားသို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ဆရာ့စာအုပ် တွေဖတ်ရင်းသဘောကျမိလို့မြန်မာပြည်ကိုလူကြုံနဲ့မှာပြီးဖတ်ဖြစ်တဲ့အထိပါ။ကိုယ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့လိုက်နာစရာ ကောင်းတာမို့ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေတပည့်တွေကိုထပ်ပြီးမျှဝေပေးပါတယ်။
ဆရာတော်အရှင်ဃောသိတရေးတဲ့ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ တစ်ဘဝသာသနာ စာအုပ်ပါ။စာမျက်နှာကိုးရာ ကျော်ပါတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအွန်လိုင်းမှာရှာပြီးလက်ပ်တော့နဲ့ဖတ်လိုက်ဖုန်းနဲ့ဖတ်လိုက်နဲ့ပြီးခါနီးနေပါပြီ။
အချိန်ကုန်ခံပြီးအပြင်မှာလိုက်မရှာပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလို သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်စာပေ တွေမရေမတွက်အောင်ရှိနေတဲ့ဒီခေတ်မှာစာဖတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကစာကြည့်တိုက်သွားစရာမလိုဘဲမိမိလက်ထဲ ကဖုန်းမှာသော်လည်းကောင်းကွန်ပျူတာမှာသော်လည်းကောင်းစာအုပ်ဖိုင်လေးတွေထည့်ပြီးရတဲ့အချိန်လေးမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုအချိန်ပြည့်ပွတ်မည့်အစား မိမိနှစ်သက်ရာစာအုပ်စာပေကိုဖတ်ရှု့ခြင်းအားဖြင့်အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်ဗဟုသုတတွေရှာမှီးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အသိဥာဏ်ပညာပြည့်ဝသောလူသားအရင်းအမြစ်တွေ ဖြစ်လာမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, May 14, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook